ACDC Electrical & Automation Components (Myanmar)
Call Us: 09 40 20 60 838
Process Controller & Relay
MCB Contactors & Overload & More
ခေတ်မှီတိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိုးတက် ခေတ်မှီလာတာနဲ့အညီ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ တိကျမှု ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စတာတွေဟာလည်း အလွန်အရေးပါတဲ့အခန်း ကဏ္ဍ မှ ပါဝင်နေပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ မတူညီခြားနာလှတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေလည်ပတ်တဲ့ နေရာမှာ အရေးပါတဲ့ Electrical & Automation ဆိုင်ရာတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Componentsတွေဟာ Quality, Reliability, Warranty, User-friendliness ရှိဖို့အပြင် Price Competitive ဖြစ်ဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်။
Quality , Reliability, Warranty နဲ့ User-friendliness ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်ရင်ပိုပြီး ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း နားလည်ယုံ ကြည်ထားပါတယ်။
အထက်ပါ ယုံကြည်မှု အတိုင်း ACDCဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ကြတ်မတ်စစ်ဆေးပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ Electrical & Automation Components တွေကို ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့ Customer Focus Policy အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေတဲ့ Shop တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။
09 40 20 60 838,
09 40 20 60 848,
09 40 20 60 858
241, Ground Floor, Ngu Wah St. , Ahlone Tsp,
© 2020 acdc. All rights reserved. Website Generator by NetScriper
© 2020 acdc. All rights reserved.
Website Generator by NetScriper